Famaritana ny vaksiny
Inona no atao hoe vongan-drano?
Ny fanodinana dipoavatra dia fizarana fisarahana izay ampiasaina hanadiovana na hitokana ireo fitaovana mora simba, toy ny aromatika voajanahary. Ampiana amin'ny rano fisotro ny rano na ny rano, hampidina ny tebitebin'ny tohotra. Ny tanjona dia ny hanasitrana sy hanasarahana ireo singa eo amin'ny mari-pana eo ambanin'ny lanjany.
Ny tombony amin'ny fanodinana dipoasy noho ny fanodinana tsotra dia ny fampihenana ny fihenan- tsakafo amin'ny fihoaram - pefy .
Ny fanodinana dampanina dia ilaina amin'ny fanadiovana ny vovonan'aretina organika, na dia mihanaka kokoa aza ny famongorana vaksina. Rehefa voadio ny organika dia alefa ny vovony. Satria ny rano sy ny taova dia tsy azo ovaina, ny voka-dratsiny dia miorina amin'ny dingana roa: ny rano sy ny vovobony organika. Ny fanapahana na fizarazarana dia azo ampiasaina mba hanasarahana ireo lafin-javatra anankiroa mba hahazoana ny fitaovana organika voadio.
Fitsipika Aorian'ny famoahana ny dity
Rehefa mifangaro sy mihetsiketsika ny fifangaroan-drano roa (ohatra, ny rano sy ny taova), dia miteraka ny tsindry avy amin'ny vatana ny habeny tsirairay, toy ny hoe tsy misy ny singa iray hafa. Noho izany, mitombo ny tsindry manerantany amin'ny rafi-pandehan'ny rafitra raha oharina amin'ny hafanana ankoatra izay mety ho azy raha iray monja amin'ireo singa. Rehefa mihamaivana ny tsindry amin'ny atmosfera ny habetsahan'ilay angovo, dia manomboka ny orana. Satria mihena ny hafanana amin'ny mari-pana, dia simba ny fahasimban'ny singa hafanana.
Fampiasana ny fanodinana
Ny fanodinana dipoavatra dia ny fomba tiany indrindra hanasarahana ny menaka iankinan'ny aina. Ampiasaina ihany koa izy io amin'ny "fanariana dipoavatra" ao amin'ny rafitra varimbazaha ary manasaraka ny fivarotam-panafody mahazatra varimbazaha mahazatra, toy ny asidra fetsy.
Electron Domains sy ny VSEPR Theory
Famaritana ara-tsimiafika simika
Famaritana ny asan'ny polyprotika
Fandrindrana ny famaritana ny isa
Famaritana ny vokatra ara-pahasalamana mahery
Famaritana momba ny toe-javatra
Famaritana ny elasticity sy ny ohatra
Lalàn'ny defensista voafaritra mazava
Torolalana iray hanampy ireo mpampianatra taona voalohany hiankohoka
Toro-hevitra tena ilaina amin'ny fanatrehana ny mozika MBA
Ny ankamaroan'ny mpiangaly mozika mozika amin'ny '80s
Inona no atao hoe ranomasina?
Fanomezana ara-panahy: Fanampiana
24 Volleyball fa tsy fantatrao
'King Lear': Albany sy Cornwall
Ireo horonantsary Kid Killer tsara indrindra
Toyo Ito, mpahay tranonkala tsy afa-po
Hahafinaritra ny asan'ny Halloween natao ho an'ny ankizy
Nekena ho any amin'ny sekoly ambaratonga ambony ianao: Ahoana no hisafidianana?
8 Tsara indrindra ny R & B sy ny hira famerenana tononkalo
Ny 1500-metatra maneran-tany
Top 15 Boky momba ny trano fonenana
Fampahafantarana momba ny fanamelohana manafaka
Mampiasa ny teny hoe 'Todo'
Ny fivoaran'ny loko volom-borona